Iflethi okanye indlu ekwicomplex yaseLaguna Boulevard enendawo yokubuka ulwandle - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex yaseLaguna Boulevard enendawo yokubuka ulwandle
Ustronie Morskie, Kołobrzeski / Ustronie Morskie, Poland
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRenters
Le flethi yeyendawo ekhethekileyo ✯ onokukhetha kuyo iiRenters Prestige.
✯ Kwiindwendwe ezifuna kakhulu, izinto ezinokusetyenziswa ezahlukahlukeneyo ezaziwa ziihotele ★★★★★ zilindile.
Izizathu zokukhetha iflethi okanye indlu yethu ekwicomplex:
Indawo✯ efanelekileyo yokuhlala e-Ustronie Morskie!
Ukubhalisa xa ufika nokuphuma✯ kwabucala
✯Iflethi okanye indlu ekwicomplex emangalisayo
enomatshini✯ okhupha✯ umoya
obandayo okanye oshushu Indawo yokujonga ukuze✯ ubhataliswe imali eyongezelelekileyo: indawo yokupaka✯, izilwanyana zasekhaya
Sikhupha ii-invoyisi zeVAT - xa sicelile
ISAKHIWO KUNYE NENDAWO INGCACISO:
Iflethi ifumaneka eUstronie Morskie, kwindawo entsha yokuhlala "Boulevard" eKościuszki Street. Le ndawo inomtsalane ngenxa yendlela ebukeka ngayo kule mihla kunye nendawo ekuyo - ikwindawo engaselwandle, kufutshane kakhulu nolwandle.
Ukubonakala okumangalisayo kolwandle kunokuthandwa kungekhona nje kwiflethi okanye kwindlu ekwicomplex, kodwa nakwindawo yokujonga eseluphahleni lwesakhiwo.
Ingingqi yakhiwe kakuhle, ngoko uza kufumana yonke into oyifunayo kufutshane neflethi okanye indlu ekwicomplex. Kwindawo ekufutshane unokutyelela iindawo ezininzi zokuthengisa kunye neenkonzo kunye neevenkile zokutyela. Kukho nepaki yemoto kumhlaba, apho ungashiya khona imoto yakho.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex yaseLaguna Boulevard yindawo entle onokukhetha kuyo iholide yosapho kunye nokuhlala abantu ababini - inokuhlala abantu abadala abayi-4. Kuza kubakho nendawo enye eyongezelelekileyo yomntwana. Ukongezelela, abazali abanabantwana banokubhukisha ikhothi yokuhamba ngemali eyongezelelweyo kunye nesitulo esiphakamileyo.
Le flethi inomtsalane ngenxa yoyilo lwayo olugqwesileyo kunye nezinto onokuzisebenzisa - umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu uluncedo kwiintsuku ezishushu, kwaye igumbi ngalinye lilubona kakuhle ulwandle oluvulekileyo.
Indawo yeflethi iquka igumbi lokuhlala elinekhitshi elincinci, igumbi lokulala negumbi lokuhlambela elineshawa. Indawo yokuhlala, enesofa etofotofo kunye neTV, yindawo efanelekileyo yokuphumla nokuphumla. Igumbi lokulala linebhedi etofotofo, iwardrobe nedesika enesitulo. Ukongezelela, izixhobo ezisemgangathweni, ikhitshi elincinci likuvumela ukuba ulungiselele ukutya okuthandayo. Uyilo olukhethekileyo kunye nezixhobo ezipheleleyo kunye nekhitshi elifunekayo kunye nezinto zokuhlamba ziqinisekisa ukuba uhlala kamnandi.
Ibhedi eyisofa (elala abantu ababini), isofa ekwayibhedi (enye) - yabantwana, itafile yekofu, izixhobo zasendlini, phuma uye kwindawo enophahla (ngezitepsi)
Ibhedi elala abantu ababini, izinto zokondlula ibhedi, iitafile eziyi-2 ezisecaleni kwebhedi, iwardrobe enesipili, idesika enesitulo
Itafile enezitulo eziyi-3 nebhanka yasekhitshini, iketile, umatshini wokwenza ikofu, i-toaster, i-microwave, ifriji, umatshini wokuhlamba izitya, iikomityi zeglasi, izinto zokupheka ezisetiweyo, izinto zokuqhotsa, ipani yokufraya
Ishawa, indlu yangasese, isinki, umatshini wokuhlamba, umatshini wokomisa iinwele, isipili, iitawuli
I-Cable TV / i-satellite, i-WiFi enejubane elikhulu
IZILWANYANA ZASEKHAYA: IZILWANYANA ZASEKHAYA
zivumelekile ukuba zibhatale i-147N 100 ngokuhlala ngakunye
indawo YOKUPAKA: Iindawo ezimbini ZOKUPAKA
ezibhatalelwayo ecaleni kwesakhiwo ngemali eyongezelelweyo eyi-147N 25 ngosuku, kwindawo eyi-1
isofa ekwayibhedi eyi-1, \_u00A0Ibhedi yomntwana eyi-1
4.72 · Izimvo eziyi-29
Umbuki zindwendwe ngu- Renters
Izimvo eziyi-12 966
Iilwimi: English, Deutsch, Polski
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ustronie Morskie